Dibloomada - Khabiirka shaqooyinka bulshada - Geofumadas
Koorsadani waxaa loogu talagalay dadka isticmaala xiisaha u leh shaqooyinka madaniga ah, kuwaas oo doonaya inay bartaan aaladaha iyo qaababka si dhameystiran. Sidoo kale, kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-dubbaridka qaabeynta shaqooyinka madaniga ah ee meertooyinkooda kala duwan ee helitaanka, qaabeynta iyo hagida natiijooyinka wejiyada kale ee geeddi-socodka.
U abuuro karti u helidda, naqshadeynta iyo qaabeynta moodooyinka shaqooyinka madaniga ah. Koorsadani waxaa ka mid ah barashada madaniga 3D, oo ah mid ka mid ah barnaamijyada loogu adeegsiga badan yahay ee loo yaqaan 'topography'; iyo sidoo kale adeegsiga aaladaha ay macluumaadka ku dhex jiraan wejiyada kale ee hawsha, sida InfraWorks. Intaa waxaa sii dheer, waxaa ku jira aaladda 'AutoCAD' oo loogu talagalay hanashada ballaaran ee farsamooyinka kombuyuutarka lagu caawiyo ee aan lagu sharxin qaybaha '3D XNUMXD'.
Koorsooyinka waxaa loo qaadan karaa si madaxbanaan, iyadoo la helayo diblooma koorso kasta laakiinDibloomada Shaqooyinka Khabiirka»Waxaa la soo saarayaa oo keliya marka isticmaalaha uu qaato dhammaan koorsooyinka safarka.
Faa'iidooyinka lagu dabaqo qiimaha Dibloomada - Khabiirka CivilWorks
Heerka 3D Madaniga ah 1 …… USD 130.00 24.99
Heerka 3D ee madaniga ah 2 …… USD 130.00 24.99
Heerka 3D Madaniga ah 3 …… USD 130.00 24.99
Heerka 3D Madaniga ah 4 …… USD 130.00 24.99
Post Previous" Hore Geomoments - Dareenka iyo Goobta hal app ah
Post Next Dibloomada - Khabiirka Howlgalka BIMNext »